Andron’ny varika: nasongadina ny simpona tany Sava | NewsMada
Andron’ny varika: nasongadina ny simpona tany Sava
Isaky ny zoma faran’ny volana oktobra ny fankalazana, isan-taona, ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny varika (na ankomba). Na izany aza, natao ny alarobia 31 oktobra teo ny tany Andapa ho an’ny faritra Sava ny “Fetin’Ankomba”. Lohahevitra noraisina ho an’ity taona ity ny hoe: “Ny varika, vako-pirenena, namana mila arovana”.
Nisy hetsika “festival” lehibe nitety ny tanànan’Andapa, nokarakarain’ny Wildelife Conservation Society (WCS), ny Duke Lemur Center (DLC), ny Madagascar National Park (MNP) ary ny Lemur Conservation Foundation (LCF).
Manodidina ny 20 ny mpandray anjara, nahitana fikambanana miaro ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina sivily ary ny sekoly.
Miara-miasa amin’ny mponina
Miara-miasa amin’ny fikambanana vondrona olona ifotony miisa sivy koa ny WWF amin’ny fiarovana ny ala mando, toeram-ponenan’ny varika. Voakasik’izany ny any amin’ny tandavanala Marojejy, Anjanaharibe Atsimo, Tsaratanàna (Comatsa). Misy ny fitetezana ny ala ho fanaraha-maso ataon’ny mpisafo ala, ny fanarenana ny zavamananaina simba, ny fanabeazana eo amin’ny tontolo iainana ho an’ny mponina.
Nambaran’ny tompon’andraikitry WWF any amin’ny faritra avo toerana tapany avaratry ny Nosy, Rakotondrasoa Fenohery, fa “mahatratra 25 000 ha ny ala arovanay ao amin’ny Comatsa Atsimo, ahitana ireo karazana ankomba maro, eo anelanelan’ny Alam-pirenena Marojejy sy ny Tahirin’ala manokana Anjanaharibe Atsimo. Famantarana manokana ny ankomba any amin’ny tapany avo toerana any avaratr’i Madagasikara ny simpona. Tafiditra ao anatin’ny karazana varika miisa 25 tena tandindomin-doza maneran-tany”.